किरण पाण्डे - कान्तिपुर समाचार
पुतलीको बिहे भयो, जन्ती जान पाएनअँधेरी खोलाले लग्यो बरिलै...
करिब एक महिनअघिदेखि बेल हेलिकप्टरको डेमोन्सट्रेसन फ्लाइटमा जाने कुरा थियो  । हाई अल्टिच्युडमा जाने ‘रेस्क्यु हेलिकप्टर’ का रूपमा डिजाइन गरिएको यो क्यानाडियन र अमेरिकन हलुका हेलिकप्टरमा सगरमाथा बेसक्याम्प जान म निकै उत्साहित थिएँ  ।
चिसो झेल !
केहीअघि दैलेखको गुराँसे पुगिएको थियो । गर्मी बढिरहेका बेला चियो पेय मागियो ।
शारीरिक सुगठनमा ‘द विस्ट’ अर्थात् दानव उपनामले परिचित रोली विंकलार गत साता आईएफबीबी प्रोफेसनल बडीबिल्डिङ प्रो क्वालिफायरका लागि काठमाडौं आएका थिए  । ‘गेस्ट पोजर’ का रूपमा निम्त्याइएका उनी यस खेलमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो शरीर भएका व्यक्ति हुन्  ।
किरण पाण्डेका लेखहरु :
बिदाका बेला जनावर हेर्न र जंगल घुम्न कसलाई मन लाग्दैन ? तर मन लागेर मात्र सबै ठाउँमा न जनावर पाइन्छन् न जंगल नै । चितवनको सौराहा जंगल–सफारीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो  ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत सौराहाको खोरसोर पुग्ने पर्यटकले आजकाल एक नयाँ सेलेब्रिटी भेट्ने गरेका छन्  । धेरैजसो पर्यटकका क्यामेरा खोरसोर पुग्नेबित्तिकै यतै सोझिने गरेको छ  ।
नेपाली विद्यार्थीले बनाएका 'वेटर रोबोट'
रोबोट प्रविधिको फडको हो । मानिसले गर्ने श्रमलाई घटाउने यन्त्रका रूपमा रोबोट प्रयोग भइरहेको छ । रोबोटले कसरी काम गर्छ भन्ने हेर्न कुनै प्रदर्शनी धाइरहनुपर्दैन, रेस्टुरेन्ट वा बैंक गए पुग्छ ।
जकर्ताको संस्कृत नाम ‘जयकृत’ हो अर्थात् जय भनेको सफलता कृत भनेको आर्जित हो । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता मुख्य रूपमा प्रशासनिक र व्यापारिक नगर हो । आठ लेनभन्दा माथिका रोड, वरिपरि हरियाली वातावरण र गगनचुम्बी महलहरूले जाकर्तालाई भव्य सहरको रूपमा चिनाएको छ ।